Duden-Panjakana Fanitsakitsahana Tsipelina, Izay Midika Hoe, Ny Famaritana, Ny - Alemaina mpisolovava an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Duden-Panjakana Fanitsakitsahana Tsipelina, Izay Midika Hoe, Ny Famaritana, Ny
Mora ny firesahana sy manoratra araka ny tokony ho - amin'ny rakibolana tsotra ho an'ny advanced SekolyAmin'ny soso-kevitra nandritra ny asa fikarohana, ny matihanina rijan manampy ny Hetsika an-tserasera sy ny fampiharana.
an-jatony ny teny, mba Manadino ny betsaka koa tsara tarehy ny, izany tamim-pitiavana norafetiko anaram-boninahitra ao amin'ny sain'ny.
Ny nomerika 'soratra masina' no hapetraka ho toy ny fandaharana eo amin'ny Solosaina, ary dia afaka ny ho ampiasaina mba Hitady mivantana rehefa Manoratra. Duden aterineto dia manome anao ny feno ny vaovao mikasika ny tsipelina, fitsipi-pitenenana, ary ny dikan'ny teny. Ny soratra masina dia mampiseho ny fampiasana araka ny tokony ho toy izany koa ny fanononana sy ny niandohan'ny ny teny sy ny lisitra ny teny mitovy hevitra. Raha toa ny fitsipi-pitenenana, ny tsipelina, teny niaviany, na tsara ny fomba: Ny teny mpanolotsaina manana ny fototra ao amin'ny teny alemana, ny fitsipika manan-danja hatramin'ny hafahafa trangan-javatra ho anao. Eto isika, dia hanome indray mitopy maso an'i ny fitsipika ofisialy ny zavatra tsipelina sy mari-piatoana, ary koa ny mandroso soso-kevitra, fanazavana, sy ny tolo-kevitra ny Duden matoan-dahatsoratra Birao. Noho izany, matetika misspellings, izay dia niditra tao amin'ny Duden tokony hitarika ho amin'ny araka ny tokony ho voasoratra tag. Ho hitanao ato ny toro-hevitra sy fahalalana fototra ny amin'ny teny alemana, izy ireo dia afaka mahatsapa ny tenany manokana lohahevitra, na fotsiny ny teny mahafinaritra mba hiezaka avy lalao. Ny voly vaovao momba ny teny alemana izany, na ny marimarina kokoa ny fanazavana eo amin'izao fotoana izao ny Tolotra. Famandrihana ny Gazety Ho hitanao ato ny Podcast ny Duden-teny toro-hevitra amin'ny zava-mahaliana momba ny teny alemana mba Hihaino, sy ny Misintona.
Ny lamina manolotra fito ny malaza rakibolana fa tsy Fampiharana, miaraka amin'ny maro fanampiny asa toy ny manan-tsaina mitady asa, na Italiana, ary Narahina.
Ny Duden trano famakiam-boky dia ny zava-baovao sy hitsapana ny rindrankajy fampiharana ny Duden rakibolana, fa ny fidirana ho any amin'ny elektronika rakibolana afa-po avy amin'ny mpitory.
Dia manolotra professional andinin-teny amin'ny teny alemana, vakio ny santionany avy amin'ny Ny boky sy ny Fanadihadiana momba ny foto-kevitra ao alemaina ny teny Alaina.
Ao amin'ity faritra ity ianareo, dia hahazo vaovao mikasika ny lohahevitra mikasika ny haino aman-Jery Sosialy, newsletters, Podcasts, Fampiharana, sy Alaina. Azonao atao ny mampiasa ny tsipelina-checker-tserasera ny andinin-teny, ny famonjena ny fotoana marina ny fomba fanoratra sy ny fitsipi-pitenenana maso. Nandritra ny taona, Duden efa nisy ny fanapahan-kevitra ny fahefana ho an'ny fanontaniana rehetra ao amin'ny teny alemana sy ny tsipelina. Eto no mahazo ny mahavariana hahatakatra ny lohahevitra mifandraika amin'ny Duden. Ao amin'ny faritra ny varotra, dia tsy maintsy tapakila ho anao ny mpitory amin'izao fotoana izao, topi-maso, sy ny filaminana sy ny tahiry-peo endrika nangonina. Ao amin'ity fizarana ity, isika dia manome ny Asa spell check online, Duden teny consulting, ny Fanohanana ara-teknika, ny mpivarotra ao amin'ny faritra sy ny zava-mahaliana momba Duden.
Bund der Vertriebenen: an-trano